Ukuzalwa kukaMariya uMariya Obusisiwe yimuphi inombolo ngo-2016. Umlando weholide lesonto, izimpawu, imithandazo nezinkondlo zezingane
Iholide leshumi lama-Orthodox lokuzalwa kukaMariya oyiNtombikazi (uMariya uMariya) yisenzakalo esibaluleke kakhulu sabathembekile. Ngalolu suku emasontweni inkonzo ibuswa, futhi imithandazo ifundwa ezindlini futhi ilungiselela umkhosi. Sekuyisikhathi eside kusukela abesifazane asebekhulile ngesikhathi sokuzalwa kukaMariya bebukele lezi zibonakaliso futhi benza amasiko, futhi namuhla abantu abasha bayathokozana, bethumela izithombe ezinhle nezinkondlo. Nakuba iningi lentsha nezingane lingasazi umlando weholide.
Uyini usuku lokuzalwa kukaMariya oPhezukileyo uMariya ngo-2016? Umlando weholidi
Umlando wesidlo Ukuzalwa kukaMariya oPhezukileyo kubamba izimpande ngesikhathi sokubusa kukaHerode Omkhulu. Ngaleso sikhathi, amaJuda acebile uJakobe no-Anna ayehlala emadolobheni aseJerusalema. Babeningi, kodwa hhayi bonke. Umbhangqwana oshadile wathandaza kuNkulunkulu ngentshisekelo yengane, kodwa kuphela ukuthula kwazwakala ngokuphendula. Abantu kancane kancane bahlukana no-Anna noJakobe, becabanga ukuthi banesono, bahlaselwa, bajeziswa. Emva kweminyaka engamashumi eminyaka ingelosi ekhanyayo - isithunywa seNkosi sabonakala kwabashade. Watshela lo mbhangqwana ngokuzalwa komntombazane wabo, owawujabule ngokungathí sina naphezu kokukhula kwabo. UMariya wanikezwa abazali ababekade bekholelwa ekunganeni kwabo, njengokwedlulele nomusa kaNkulunkulu. Le ntombazane yayihloswe ukuba ibe ngumama woMsindisi esikhathini esizayo ngenxa ye-Immaculate Conception. Umkhosi wokuzalwa kweNdanzana uthatha indawo enzima ekhalenda lama-Orthodox yamalanga amahle. Ngonyaka, izigidi zabantu zilindele ukuthi zizindle ngokuziphatha kwazo futhi zendawo yonke, ukukhumbula isimangaliso esenzeka eminyakeni eyizinkulungwane edlule. Ngusiphi isikhathi uKhisimusi weNdodakazikazi Ebusisiwe 2016 eyaziwa ngabantu abadala kanye nezingane. Njengoba leli holide lama-Orthodox lingeyadlulayo, lihlale liwela ngosuku olufanayo - ngo-September 21.
Lokho okungeke kwenzeke futhi kungenzeki ekuzalweni kukaMariya oNgcwele
Okungenzeka futhi okungenakwenziwa ngosuku lukaKuzalwa kukaTheotokos eNgcwelengcwele kuyindaba ebalulekile. Sizofuna impendulo ndawonye ... Usuku lwosuku lomkhosi lungcono kakhulu ukuqala ngomthandazo futhi sibonga kuMbusi Oyingcwele uMariya. Khona-ke ingxenye yezinhlelo eziphoqelekile ukuvakashela ithempeli elingcwele, lapho amakholwa angafaka khona ikhandlela e-altare, khumbula umzekeliso wokuzalwa ngokuyisimangaliso kweMariya futhi ucabange ngemigomo yabo yokuphila kanye nezimiso zokuziphatha. Ngalolo suku, umuntu kufanele abe nomusa, azwele, aphane, anakekele futhi angathandi. Uma kukhona izinto ezingadingekile, ungabahambisa noma ubanike, abadinga ukondla nokuhlupheka ukuze baduduze. Kodwa kukhona izinto ezingeke zenziwe ngesikhathi sokuzalwa kukaMariya oNgcwele. Isibonelo, akuvunyelwe ukuhlanganisa, ukungcola, ukuxabana nokuqeda ubudlelwane. Ngalolo suku, akukho mimoya eyamukelekayo futhi umsebenzi onzima akuvumelekile neze. Izakhamuzi zivinjelwe ukumba emhlabathini, kanye nabalimi - ukusika izihlahla, ukufakelwa izihlahla, njll.
Izibonakaliso zomphakathi zokuzalwa kukaMariya oNgcwele
Okuthandwa kakhulu ekuzalweni kukaMariya oPhezukile kusetshenziswe indlu kanye nezibonakaliso zemvelo. Ngosizo lwabo ugogo akagcini nje ukubikezela isimo sezulu, inhlanhla nokuvuna okukhululekile, kodwa futhi wayilungisa ikusasa, wabheka inhlanhla, washintsha isiphetho. Isibonelo:
Uma owesifazane ngosuku lokuzalwa kukaMariya oPhezukileyo enomusa kwabanye futhi ephana nalabo abangaphandle, iNkosi imnika izindlalifa eziningi;
Uma itafula ngoSeptemba 21 limbozwe ngokumangalisayo, isivuno siyoba ningi;
Izandla ezigciniwe emkhosini wokuzalwa kukaMariya uMariya zibonisa ukuthi ngokushesha ukuthola umsebenzi onenzuzo;
Ngalolo suku isimo sezulu sibeka ithoni sonke isizini. Uma kuvula ngomhla ka-21, ekwindla kuzoba mnandi, uma kusomile futhi kunelanga, ekwindla izophuza;
Ezinye izibonakaliso zokuzalwa kukaMariya oNgcwele zikhona, ezinye ziye zaqala ukungena. Kodwa ukuvakashela ithempeli, ubeke ikhandlela futhi ubonge uMama kaNkulunkulu njengoba ngaphambili kuthathwa njengokuphoqeleka.
Ukuzalwa koMlobokazi Obusisiwe - izithombe kwiholidi lama-Orthodox
Naphezu kobuholi beholidi, imikhosi emnandi nemikhosi enkulu ngokudansa nophuzo ayinakuqhathaniswa ngokuphelele naye. Ekuzalweni kukaNgcwelengcwele iTheotokos, kungokwesiko ukuhlala emndenini bese uhalalisela abanye ngezithombe kwiholidi lama-Orthodox. Ngisho nabangane abakhohliweyo noma izihlobo ezikude bangathumela iposi elimfanekiselo ngomfanekiso ngeposi noma kwi-Intanethi. Sesivele siqoqa izithombe ezinhle zeholidi lama-Orthodox yozalo lukaMariya oNgcwele!
Imithandazo yokuzalwa kukaMariya oNgcwele
Eholidini eliqhakazile, ukuzalwa kukaNgcwelengcwele Theotokos, imithandazo nezinkondlo zezingane zidlala indima ebalulekile. Izingane ezincane nezincane zama-Orthodox kufanele zenziwe kusukela ebuntwaneni kuze kube semlandweni nasenkolo. Kuphela ngale ndlela izingane zethu zizokwazi ukuqonda ukuthi yiliphi leliholide futhi zibonge ngobuqotho iNdodanakazi Ebusayo ngokuzalwa komsindisi owanikeza ithemba kuwo wonke umuntu ophilayo.
O, Owesifazane Ongcwele, uKristu uMsindisi wethu uMama okhethwe nguNkulunkulu,
Ngemithandazo engcwele kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzinikezele futhi othandekayo bakaNkulunkulu!
Ubani ongakujabulisi noma ongahlabeli, uKhisimusi wakho okhazimulayo.
UKhisimusi kungokwakho ukuqala kwensindiso yabantu, futhi thina,
Sedyaschie in tme sinnings, sibona uTy, indawo engabonakali ukukhanya.
Ngenxa yalesi sizathu, ulimi oluvulelekile alukwazi ukucula ngokukhululekile esizindeni.
Wena uphakeme ngaphezu kweSerifimi, ohlanzekile kakhulu.
U-Obacho wamukela izinceku zakho ezingamfanelekile udumo lwakho lwanamuhla futhi ungalilahli imithandazo yethu.
Siyavuma ubukhulu bethu,
Kuwe othandekayo siwela futhi sisheshe ekuncengeni uthando lwezingane
futhi uMama onomusa kunazo zonke uyabuza:
Thandaza eNdodaneni yakho nakuNkulunkulu wethu,
izono eziningi, ukuphenduka okuqotho nokuphila okuhle,
Kwangathi singakwazi ukwenza konke okujabulisa uNkulunkulu nemiphefumulo yethu ewusizo.
Sizonda konke okubi, siqiniswe umusa kaNkulunkulu ngokuzenzela kwethu okuhle.
Wena ithemba lethu elingenamahloni ngesikhathi sokufa, usinike ukufa kwamaKristu,
ukunyakaza okunethezeka ngezinhlekelele ezimbi zomoya kanye nefa elingunaphakade
kanye nezibusiso ezingenakuqhathaniswa zoMbuso weZulwini, kanye nabo bonke abangcwele siyavuma thina ngokungaphezi
masidumise uNkulunkulu oyedwa weqiniso,
kuZiqu-zintathu Ongcwele zalokho okukhulekelwayo, uYise neNdodana noMoya oNgcwele.
Intombikazi uMariya, iNdlovukazi yasezulwini nomhlaba,
Kuyisithombe sakho esimangalisayo se-pripadayusche, isenzo esithintekile:
Khonza ngomusa phezu kwezinceku zakho, futhi ngokuncenga kwakho onke, ulethe okudingekayo.
Zonke izingane ezithembekile zeChurch Church of the Church, gcina, ungaphenduki, uphambuke endleleni efanele,
ukuguga nokubuthakathaka kwamandla asekela, abasebancane okholweni lwangcwele ukukhula, isibindi ohlangothini oluhle,
Izoni ekuphendukeni ziletha futhi wonke amaKristu acele ukuzwa, ama-sore uvrachuy, izinyembezi ziye zanyuka,
Wena uyisikali, i-All-Mercy,
njengengenasibindi, njengesoni, njengenhloni futhi engafanele ukuthethelelwa kukaNkulunkulu,
ngakho-ke usisize, yebo, akukho sono sobuqili, ukukhohlisa nokukhohliswa nguSathane
sithukuthelela uNkulunkulu: Imamisi unguMlobi, iNkosi ngeke iphenduke.
Ngisho noma udunyiswa, ungasinika sonke isipho njengomthombo ovuthiwe,
ngokufanele uhlabelele uTy futhi udumise uKhisimusi wakho okhazimulayo.
Ukukhulula, O Lady, Ukuwa kanye nezinkinga zabo bonke, ababiza ngobuqotho igama lakho elingcwele
futhi sikhulekele isithombe sakho esithembekile.
Wena, ngemithandazo yobubi, hlambulula i-tuna yethu, lapho uwela khona futhi sikhala amaphakethe:
ukususa kithi sonke isitha nesitha, zonke izinhlobo zezinhlekelele nokungakholwa okungenhlekelele;
ngemithandazo yakho, izimvula ezinika imvula zigcwele futhi umhlaba uveza izithelo eziningi,
faka ukwesaba kwethu ezinhliziyweni zenkazimulo ukufeza imiyalo yeNkosi,
Yebo siphila ngokuthula nangokuthula ngenjongo yokusindiswa kwemiphefumulo yethu, ngenxa yomakhelwane bethu kanye nenkazimulo yeNkosi,
Ngokuba kuye, njengenkazimulo, udumo nokukhulekela njengenkazimulo nodumo noMdali, uMsindisi noMsindisi,
manje naphakade naphakade naphakade.
O, Intombi Eningi Ebusisiwe Futhi Ebusisiwe, uMdodakazi weTheotokos,
kusukela endle, ngokuvumelana nesithembiso esizalwe nokuhlanzeka ngenxa yomphefumulo wakho nomzimba wakho,
ukuba yiNdaba yeNdodana kaNkulunkulu, iNkosi yethu uJesu Kristu, noNymz, manje ezulwini, ehlala
futhi u-Imasha wabhekana nesibindi kuZiqu-zintathu Ezibusisiwe, kusukela kuLazy, njengeNdlovukazi,
uhlotshwe umqhele wokubusa okuphakade.
Ngendlela efanayo ethobekile kuwe, sisebenzisa futhi sibuza: Sifika eNkosini uNkulunkulu onesihawu
ukuthethelelwa kuzo zonke izono zethu mahhala futhi ezingathandi; sibhekene nezwe lakithi ekusindisweni kwethu,
Ukuthula, ukuthula nokuthula okubuyiselwayo, izikhathi zizothula nokuthula, ukuvukela umbuso kwababi akubandakanyi;
ngokuchichima kwezithelo ezifanayo zomhlaba, umoya wesibusiso, izimvula zithula futhi zicebile.
Futhi konke okudingekayo empilweni yethu nasensindisweni, sicela usuke eNdodaneni yakho, uKristu uNkulunkulu wethu.
Kodwa ngendlela engcono kakhulu, kufanele sihlotshwe ngokuziphatha okuhle nezenzo ezinhle, yebo,
Abalingisi sizobe siphila empilweni yakho engcwele, kusukela ebusheni kuya emhlabathini wawuhlobisa,
ethanda iNkosi; Yingakho wawungumKherubi othembekile kunazo zonke kanye noSeraphim ekhazimulayo kakhulu.
Kuye, Madame Blessed, usivulele yonke indlela eya kuMsizi futhi uhlakaniphile ekusindisweni koMfundisi, kwangathi Ungaba ngowokugcina futhi uyakwazi ukunikeza imvume,
UMbuso waseZulwini, ukuhlupheka kweNdodana Yakho, u-Eksodusi, ababulali bamaSanta
Imiyalo yakhe iyathembiswa.
Wena, Mfundisi, yilokho ithemba lethu nethemba kuBoz, futhi Sikunika isisu sethu sonke,
ngenxa yokuncenga kwakho futhi ngenxa yokuncenga, awunamahloni okuba ehoreni lokuphuma kwethu kulokhu kuphila, nasekugcineni kweSahlulelo seNdodana yakho, uKristu wethu uNkulunkulu wezinsini, ukuma kwakhe kuyothunyelwa,
futhi bajabule kuze kube phakade nawo wonke umuntu kusukela enkathini yaYe kuya enhliziyweni enhle futhi ekhazimulisa ngokuthula, ukudumisa,
ngibonge futhi ngimbusise noBaba noMoya kuze kube phakade naphakade.
Amen. Ukuzalwa kukaMariya Oyingcwele uMariya 2016 (Septemba 21) kuyindawo evulekile neyomusa, ehlobene eduze nezibonakaliso eziningi, imithandazo, amasiko. Lungiselela izithombe ezinhle nezinkondlo zezingane kusengaphambili ukuhalalisela izihlobo zakho. Qaphela izenzo zakho, uthethelele izikhalazo zabanye abantu futhi ubonge i-Progenitress ngesizathu esikhulu!
Imidwebo yezingane ezinhle futhi elula ngoMeyi 9 epencil kanye ne-watercolor. Isinyathelo-nge-Isinyathelo Iziyalo
Indlela yokugubha injabulo yonyaka omusha we-New Year 2017, yokuqala, enhle futhi engabizi. Yini ukupheka nendlela yokulandela izimpawu zonyaka we-2017 we-Rooster
Ubuciko be-origami kusuka ephepheni
Ikhukhi elifishane elinamantongomane kuhhavini ye-microwave
Umsuka ovela ushizi ocibilikile
Iresiphi ye-sauce elimnandi
Isobho nge broccoli kanye noshizi we-cheddar
Indlela yokuba abangane abangcono kakhulu
Ukudla kokwelapha ngemibanda
I-potato ikhekhe ngamakhowe kanye noshizi
U-Yuri Proskuryakova wazala intombazane (isithombe sokuqala)
Ngingayifundisa kanjani ingane ukudoba?
Ukupheka kwabantu - indlela yokuthuthukisa umbono?